UJADE ROPER KUNYE NOTANNER TOLBERT UKUTHANDABUZA UCHRIS HARRISON UYA KUBUYELA 'KWIBACHELOR - IINDABA
UJade Roper kunye noTanner Tolbert Ukuthandabuza uChris Harrison Uya kubuyela 'kwiBachelor
UJade Roper kunye noTanner Tolbert bathethe malunga noku Isidanga sokuqala I-intanethi yokubamba i-shakeup.
Kwiinyanga emva kokuhlala ixesha elide uChris Harrison wazisa ukuba angaphinde anyathele ngaphandle kwempendulo engathandekiyo kukhuselo lwakhe lokuziphatha ngokungathandabuzekiyo kuka-Rachael Kirkconnell ngokobuhlanga ngaphambili, isibini esithandwayo somlingane sisindwa kwimeko yemicimbi.
Ngelixa Ukuthetha nathi ngeVeki nganye , UTanner uvumile ukuba uphalaza ithemba malunga nokubanakho kukaChris Harrison ukubuyela kwisikhundla sakhe esikwisikhundla esiphezulu kwi-Bachelor franchise.
Ndikholelwa ukuba uChris angaphinda abe nayo xa yonke le nto yenzekile ekuqaleni, ngathi, bendihlala ndithanda ukuba, 'Owu, uya kuphinda abe ngokuqinisekileyo. … Uza kuthatha nje ixesha elinye nokuba imeko inganjani, ': utshilo uTanner. Kodwa andizange ndive namarhe. [Kodwa] kokukhona iphakathi, ngokungathi, ukungaqiniseki okongezelelekileyo ndijika ndibekho.
IJade kunye neTanner Cinga iiMilinganiselo zeXesha leBachelorette liza kuhla ngaphandle kukaChris Harrison
IABCUChris Harrison weCachelor.
I-ABC iazise ukuba iinkwenkwezi zangaphambili zeBachelorette uKaitlyn Bristowe kunye noTayshia Adams bazakugcwalisa uChris njengomsingathi wenguqu kaKatie Thurston yenkqubo yezithandani, nangona kunjalo ingaba iya kuba lelinye kuphela ixesha lokwenza? Kudliwanondlebe, uTanner ukhankanye ukuba ucinga ukuba i-duo iya kwenza umsebenzi obalaseleyo kwaye iyakwazi ukuthwala imithwalo kwidesika. UJade ukongeze wavuma ukuba la manenekazi ma-2 anokuqina kwi-Bachelor Nation kwaye baya kwenza umsebenzi ongenakwenzeka.
Kodwa ukuza kuthi ga ngoku amanqaku ayahamba, esi sibini asiqinisekanga ngaba bafazi babini abanokuthi babenzele abahlali bababukeli esele bethembisile ukuba boyisile umboniso kwi-intanethi ibambe imeko yemicimbi.
Inkampu yejeff nejordani
UTanner uvumile ukuba ungumlandeli we-CH. Enyanisweni, uChris Harrison usebenze umkhosi kaJade noTanner we-2016 emva kokudibana kunye nokuthandana ngokulandelelana kwe-Bachelor eParadise.
Ndiyathemba ukuba kukho uhlobo oluthile lwesigqibo apho kuba, ndiyathetha, ubuso bobuso, i-Bachelor eParadesi 'ekhankanywe. Ke iya kuba kukutsala umdla ukubona indlela ehamba ngayo. Ndiqinisekile ukuba amanqaku anokuba phantsi nje kwezi nyanga zili-12. … Ukuba bekufuneka ndiqashele, ndiyakholelwa ukuba amanqaku anokuba sezantsi ngenxa yokuba ndiyakholelwa ukuba kungabakho indawo eqinisekileyo yabo bathi, njengathi, 'andibukelanga uChris Harrison. ukuthatha ubudenge ngenxa yomboniso kuyaqhubeka nokuba ngumboniso, nangona kunjalo kuya kuba kukutsala umdla ukuze ubone okwenzekayo kugqithisela phambili.
Esinye isiDanga seBachelor sathi banethemba lokuba uChris Harrison uza kubuyela kwiFranchise
Ifoto: GettyUSean Lowe kunye noCatherine Giudici.
UJade kunye noTanner ayisosibini esithandwayo seBachelor esilinganisa ubunzima bokubamba i-intanethi. Kudliwanondlebe lwakutsha nje kunye nathi ngeveki , UCatherine Giudici utyhile ukuba unethemba lokuba uChris uza kubuya kwakhona kwi-The Bachelor franchise kwaye ukholelwa ngamandla ukuba uza.
Ndidinga ukumbona esiza kwakhona, uCatherine wayalela indawo ephumayo. Ndiyakholelwa ukuba uza. Ndiyathemba ukuba wenza njengesiphumo sokuba ndiyazi ukuba baninzi abalandeli beBachelor kwimarike exhomekeke kuye ukuba abe lilizwi 'lesiGanga. UChris sisiseko esisebenzayo wonke umntu anokuthayipha exhomekeke kuye.
UCatherine wongeze ukuba yena nomyeni wakhe, owayesakuba yinkwenkwana yeBachelor uSean Lowe, bayamthanda kwaye bayamhlonela uChris, kwaye uya kuthi ngalo lonke ixesha abe 'yiBachelor' [umamkeli] kubo.
Ukulandela ihlazo lobuhlanga ngalo lonke ixesha likaMat James leBachelor, uChris Harrison akazange amkele uJames'Emva kokugqibela kukaRose okokugqibela kwaye wayetshintshwe nguEmmanuel Ocho. Ixesha elizayo likaKatie Thurston le-Bachelorette iya kuba lixesha lokuqala igqala leTV elingasayi kubamba ixesha le-franchise kwiminyaka engama-20 edlulileyo.
UJess kunye no-dan mafs
Okunzima ngakumbi kwiBachelor
Izigaba: Inetflix Iwiki Hollywood
yinyikimise izindlu zase-georgia ezithengiswayo
Iindaba ezili-12 zemilwaukee wi
Dr tara narula ubuhlanga
UCharles green utatomkhulu onomsindo ulungile
U-chris uthixo ongumfazi